साउदीले उच्च सीप भएका विदेशीलाई साउदी नागरिकता प्रदान गर्ने ! नेपालीहरुले पाउलान ? - ramechhapkhabar.com
साउदीले उच्च सीप भएका विदेशीलाई साउदी नागरिकता प्रदान गर्ने ! नेपालीहरुले पाउलान ?
काठमाण्डौ – साउदी अरेबियाले विशेष सीप भएका विदेशी नागरिकलाई साउदी नागरिकता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । डाक्टर, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, खेलकुद र प्रावि’धिक लगायतको विशेष क्षेत्रमा काम गर्ने उच्च सीप भएका विदेशी नागरिकलाई साउदीको
नागरिकता प्रदान गर्न बिहीबार साउदीको शाही आदेशले अनुम’ति दिएको हो । साउदीले २०३० सम्मको आफ्नो योजनामा विदेशी नागरिकलाई साउदी नागरि’कता दिने विषय समेटेको छ ।
उच्च सीप युक्त विदेशी नागरिकलाई आक’र्षण गर्न र साउदीलाई
ज्ञानको हब बनाउनका लागि यो कदम अघि बढाएको साउदीले जनाएको छ । वैज्ञानिक, डाक्टर र अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा विदेशीहरूलाई आकर्षित गर्न र साउदीमा आकर्षण व्यापारिक वातावरणको सिर्जना गर्ने उद्देश्य साउदीले लिएको छ । उज्यालोअनलाइन बाट
बायोमेट्रिक दर्ता नगरेका श्रमिक श्रम नवीकरण गर्न नेपाल नै आउन पर्ने
यदि बिदामा नेपाल आउनुभएको छ भने टिकट काट्नुअघि आफ्नो श्रम अनिवार्य रूपमा जाँच गर्नुपर्छ । विदेश उड्ने मितिले ९० दिनको श्रम अवधि नभएमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइँदैन । यो खबर आजको उज्यालो अनलाइन मा छ